ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာ နေ့ဆွမ်းနဲ့ လှူဖွယ်ပစ္စည်း တွေ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေ ရွှေ သွေးအောင်၊စံရတီမိုးမြင့်နဲ့ လင်းလင်း – XB Media Myanmar
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာ နေ့ဆွမ်းနဲ့ လှူဖွယ်ပစ္စည်း တွေ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေ ရွှေ သွေးအောင်၊စံရတီမိုးမြင့်နဲ့ လင်းလင်း
မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့်က နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုဇာတ် ကားတွေနဲ့ စတင်အောင်မြင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ အသားအရေလှ လှ လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ မျက်နှာလေးကလည်း ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်အောင် လှနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စံရတီမိုးမြင့်က ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် Body လေးနဲ့ ဘာဝတ် ဝတ်တင့်တယ်လှပနေတဲ့ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်။
စံရတီမိုးမြင့်အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ ကြော်ငြာနဲ့ Photo Shooting လေးတွေအဓိကရိုက်ကူးပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့စိတ်ထားအလှပိုင်ရှင်လေး စံရတီမိုးမြင့်က အခုလည်း ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာ နေ့ဆွမ်းနဲ့ လှူဖွယ်ဝ တ္ထုပစ္စည်းတွေကို ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်နဲ့အတူ နေရွှေသွေးအောင်၊ မိတ်ကပ်လင်းလင်းတို့ကလည်း အတူတူပါဝင်ပြီး ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စံရတီမိုးမြင့်က ”ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား နေ့ဆွမ်းနဲ့ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်. မြင်သောသူ ကြားသောသူများအားလုံး ကုသိုလ်ထပ်တူ ထပ်မျှ ရကြပါစေ…ဤကောင်းမှုသည် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ရာရောက်ကြောင်းအတွက် အ ထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေ” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ချစ်ပရိသ တ် တွေအတွက် သာဓုခေါ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေးစံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ အလှူပြုပုံ ရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source & Photo Credit- San Yati Moe Myint’s FB Acc,Reference&Credit:Myanmarload.com
မင္းသမီးေခ်ာေလး စံရတီမိုးျမင့္က နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္ေတြတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယိုဇာတ္ ကားေတြနဲ႔ စတင္ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည္လင္ဝင္းပတဲ့ အသားအေရလွ လွ ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ စံရတီမိုးျမင့္ကေတာ့ မ်က္ႏွာေလးကလည္း ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႕မထင္ေအာင္ လွေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စံရတီမိုးျမင့္က ပိန္ပိန္သြယ္သြယ္ Body ေလးနဲ႔ ဘာဝတ္ ဝတ္တင့္တယ္လွပေနတဲ့ မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္လို႔လည္း ဆိုနိုင္ပါတယ္ေနာ္။
စံရတီမိုးျမင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ Photo Shooting ေလးေတြအဓိကရိုက္ကူးၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးညံ့စိတ္ထားအလွပိုင္ရွင္ေလး စံရတီမိုးျမင့္က အခုလည္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွာ ေန႔ဆြမ္းနဲ႔ လွူဖြယ္ဝ တၳဳပစၥည္းေတြကို ဆပ္ကပ္လွူဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ စံရတီမိုးျမင့္နဲ႔အတူ ေနေရႊေသြးေအာင္၊ မိတ္ကပ္လင္းလင္းတို႔ကလည္း အတူတူပါဝင္ၿပီး ကုသိုလ္ျပဳလွူဒါန္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စံရတီမိုးျမင့္က ”ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ေန႔ဆြမ္းနဲ႔ လွူဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆပ္ကပ္ လွူဒါန္းခဲ့ပါတယ္. ျမင္ေသာသူ ၾကားေသာသူမ်ားအားလုံး ကုသိုလ္ထပ္တူ ထပ္မၽွ ရၾကပါေစ…ဤေကာင္းမွုသည္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္းအတြက္ အ ေထာက္ အပံ့ျဖစ္ပါေစ” ဆိုၿပီး လူမွုကြန္ယက္မွာတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ ခ်စ္ပရိသ တ္ ေတြအ တြက္ သာဓုေခၚခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလးစံရတီမိုးျမင့္ရဲ့ အလွူျပဳပုံ ရိပ္ေလးေ တြကို ျပန္လည္မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
မြန်မာဆန်ဆန်လေးဝတ်ဆင်ကာ မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ လက်မှတ် ထိုးပွဲအခမ်းအနားကို တက်ရောက် ခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဆံပင်ပုံစံလေးပြောင်းကာ ဆယ် ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်လိုနုပျိုလှပနေတဲ့ ချောရတနာ